Cajiibka: WebSundewew Software Scrabing Software. Noocyada iyo Shuruudaha Nidaamyada Jilitaanka
Webka xajinta waxaa ka mid ah ururinta macluumaadka laga helo bogagga shabakadda oo ay u jajabiso sida shuruudaha isticmaalaha. Nidaamkani si joogto ah ayuu u kobcayaa, waana sababta ay noocyada cusub ee software u soo baxayaan. Maqnaanshaha Webku waxay hadda noqotaa habka ugu fudud uguna fudud ee loo soo saaro macluumaad faa'iido leh oo ka socda boggaga internetka ee kala duwan. WebSundew waa xoog weyn oo dhamaystiran shabakadda webka qalab gacan ka caawinaya soo saaridda xogta xawaare sare iyo wax soo saarka. Iyadoo WebSundew, waxaad si sahlan u qabsan kartaa tiro badan oo xog ah waxayna u bedeli kartaa qaab la jecelyahay.
WebSundew - Ku haboon ganacsiyada iyo shirkadaha:
WebSundew waxay ku haboon tahay ganacsiyada (ganacsatada, dukaamada internetka, wakaaladaha guryaha, IT-da) iyo barnaamijyada. Waad diidi kartaa xogta aad rabto, si aad u goosatid oo aad ku kaydiso qaababka JSON ama CSV. WebSundew wuxuu ka kooban yahay afar nooc oo kala duwan: Lite, Professional, Enterprise, iyo Standard.
Waxaad dooran kartaa qayb ku salaysan baahidaada iyo rajooyinkaaga. Tusaale ahaan, nooca Lite wuxuu ku haboon yahay bilowga iyo shaqaaleeyaha, iyo version Professional waa mid aad u fiican ganacsiyada ballaaran. Qeybta ugu fiican waa WebSundew waxay soo rogi doontaa xogta loo baahan yahay si faylasha faylasha loo qoro oo la xoqdo labada sawirro iyo dukumiintiyo qoraal ah.
WebSundew - Adeeg wax soo saar leh oo cajiib ah:
Haddii aad qiimeeysid wax soo saarka shaqada oo aad ogaatid sida loo xisaabiyo lacagta, waxba kama qaban kartid WebSundew. Waa adeeg aad u macquul ah oo si fiican loo yaqaan, kaas oo nuqulo iyo dhajiya xogta oo ku xardhan sida shuruudahaaga. Waxaad xoqin kartaa macluumaadka laga helo boggaga internetka ee asaasiga ah iyo kuwa asaasiga ah, adigoon wax u dhimeyn tayada.
Si loo qiimeeyo wax ku oolnimada, waxaad u baahan tahay inaad soo dejiso oo aad gasho WebSundew. Iyadoo tan sawir gacmeed , waxaad diirada saari kartaa sharraxaadda meta, koobabka meta, iyo ereyada muhiimka ah ee goobta ku yaalla indho furan.
WebSundew wuxuu wax ka qabtaa wax kasta oo internetka ah oo aan lahayn qoraallo:
WebSundew waa qalabka kaliya ee wax ka qabsan kara internetka iyada oo aan wax laga qaban. Qalabkani wuxuu u fiican yahay kuwa aan barnaamijka ahayn iyo kuwa aan codka lahayn, oo uma baahnid wax xirfad barnaamij ah si aad uga faa'iidaysato. Taa baddalkeeda, WebSundew waxay kugu hageysaa adigoo u maraya qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka iyada oo aan la isticmaalin kumbuyuutar la'aan iyo dukumiintiyada HTML-ka si sahlan loo dhigo. Natiijooyinka waxaa lagu keydiyaa qaababka CSV, XML iyo qaab-xisaabeedka. Shirkadaha sida hay'adaha maaliyadeed iyo kan bangiyada, hay'adaha guryaha ijaarada ah iyo bandhigyada ayaa ka faa'iideysan kara tani xogta xoqista qalab.
Markaad isticmaasho Websundew, waa inaad leedahay mid ka mid ah hababka soo socda:
1. Shuruudaha Nidaamka Hawlgalka: Windows 7 / Vista / XP / 2000
3. Wareegtada (CPU): Athlon 1000 MHz ama Pentium III
WebSundew Interface-user-friendly interface:
WebSundew waxaa ugu fiican loo yaqaan interface interface-ka ku caawinaya inaad soo dejiso sawirada tayada nidaamka. Waxay si sahal ah u wadi kartaa Webka 2. 0 shabakadaha iyo macluumaadka laga soo saaro ilaha HTML ee degaanka. Soo qaado wicitaankii bilaashka ah iyo isku day WebSundew muddo 15 maalmood ah si loo xaqiijiyo tayadiisa. Marka ay dhamaato muddada tijaabada, suurtogal maaha inaad isticmaasho WebSundew, markaa waa inaad iibsataa. Waxaad xoqin kartaa ilaa 100 bog oo website ah oo leh qaabka tijaabada, ka dibna softwareku wuxuu joojiyaa shaqada wuxuuna kaa doonayaa inaad wax ka bixiso $ 20 illaa $ 70. Marka la soo gaabiyo, WebSundew waa xog-ururiye xogeed oo wanaagsan iyo calaamadaha webka Source .